Nyocha COVID-19 ọhụrụ mmadụ na-achọ naanị otu ugboro kwa ọnwa isii gbanwere egwuregwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nyocha COVID-19 ọhụrụ mmadụ na-achọ naanị otu ugboro kwa ọnwa isii gbanwere egwuregwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ajụjụ Ọnụ • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Epitome Risk, onye ndu na njikwa ihe egwu, usoro nnabata COVID, yana nkwado nchekwa, kwupụtara na akpọrọ Lisa Wilson onye isi ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa.
Nke a nwere ike bụrụ mmalite nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke nnwale COVID ọhụrụ emere maka ndị gbara ọgwụ yana ndị na-anaghị agba ọgwụ mgbochi. Nnwale a ga -egosi etu ahụ gị siri dị ike ịnabata nje ahụ. Ọ bụrụ na ị dị mma, ọ ga-agwa gị etu ahụ gị si nwee ike ịlụ ọgụ COVID-19. Nnwale a bụ naanị otu ugboro kwa ọnwa isii. A na -ewere ya dị ka onye na -agbanwe egwuregwu na onye na -azọpụta ndụ.
N'afọ gara aga, otu ndị dọkịta, ndị sayensị, ndị nyocha, na ndị mmekọ Epitome Risk mụtara na iwepụ ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ihe na -echebe ndị mmadụ na COVID.
Dr. Fauci na White House kwenyere na ịmara ọnụọgụ nke ọgwụ mgbochi ahụ nke ahụ gị mepụtara mgbe ọgwụ mgbochi COVID bụ isi ihe iji ghọta ọkwa nchebe gị megide COVID na ụdị ya niile.
Ndị otu Epitome Risk mepụtara ule ị nwere ike were n'ụlọ ga-eme ka ị mata ọkwa mgbochi mgbochi gị n'ime awa 24-48.
Epitome bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe egwu dị na US, ọkachamara na nrube isi na nkwado nchekwa COVID-19. Ọ bụ onye isi na -eweta nnwale ule mgbochi mmadụ.
Lisa Wilson, onye isi otu Epitome Risk, hiwere isi na Florida, USA.
Lisa Wilson bụ ọbịa na taa Ihe ngosi akụkọ na -agbasa, mepụtara na nkwado nke Network Njem Nleta Ụwa.
Dr. Fauci na White House kwenyere na ịmara ọnụọgụ nke ọgwụ mgbochi anụ ahụ nke emepụtara mgbe ọgwụ mgbochi COVID bụ isi ihe iji ghọta ọkwa nchebe mmadụ megide COVID na ụdị ya niile.
Ndị otu Epitome Risk mepụtara nnwale nke ga-eme ka mmadụ mara ọkwa mgbochi ọgwụ mgbochi n'ime awa 24-48. Nsonaazụ ụdị nnwale a dị mma maka ọnwa ndị na-abịa ka emechara ya, ọ ga-enyekwa nkọwa doro anya nke ihe mmadụ nwere ike ijide ma ọ bụ gbasaa COVID-19.
United States wepụtara ọmụmụ ụnyaahụ, Ọgọstụ 18, 2021, na -egosi na nchedo ọgwụ mgbochi, ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ahụ nke ahụ gị mepụtara mgbe ị nyesịrị ọgwụ mgbochi gị, na -agbada mgbe ọnwa ole na ole gasịrị.
Onye ọ bụla na -anọpụ iche nke mgbochi mgbochi na -agbada na ọnụego dị iche, n'ihi na onye ọ bụla dị iche. Ịbelata ọkwa mgbochi mmadụ na -agbada n'agbanyeghị ọgwụ mgbochi ị nwetara. Ọ dị mkpa ka ndị mmadụ mara ọgwụ mgbochi ha.
Ọ bụghị nyocha antibody niile na -enye gị otu ozi. Nnwale mgbochi mgbochi nke Epitome Risk bụ naanị ule FDA EUA n'ahịa nke ga -akọwa ọkwa nchebe gị nke ọma.
Lisa kwuru, "Ma ị na-anwale ule n'ụlọ ma ọ bụ nyocha ọgwụ mgbochi ọzọ, ị ga-agba mbọ hụ na nnwale gị na-ekpebi ịkpa oke."
Egwu Epitome na -enye ọrụ njikwa ihe egwu, gụnyere njikwa ihe egwu COVID nye ndị mmadụ, azụmaahịa, ihe nkiri, mmemme egwuregwu, na nnọkọ ndị ọzọ gburugburu ụwa.
Epitome Risk nọ na usoro nke ịbụ onye otu Network Njem Nleta Ụwa ma ga-eduga otu ọmụrụ nwa ọhụrụ COVID-19.
Gee ihe ngosi akụkọ akụkọ taa.
Diana Nighswonger ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 22, 2021 na 12:41
Ebee ka m ga -eziga maka ngwa ule a na ego ole ka ọ na -eri?
Carrie ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 20, 2021 na 06:30
Maa amụma…. Nwere COVID na Disemba afọ gara aga…. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Septemba na ọgwụ mgbochi m bụ 1.92 %…. Oh mụ na enwetabeghị "ogwu"